China Backpack T-B3105A Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
TIGERNU yakasarudzika dhizaini yekuba bhegi
Unyanzvi: Iyo bhegi iri anti kuba dhizaini ine saizi ye 29 * 14 * 45cm.Iyo huru kamuri ine hombodo dzakawanda uye yakavakirwa-mukati yakapetwa laptop slot inokwana inosvika 15.6 ″ laptop.Iwo zvakare akagwinya kune ako ezuva nezuva zvaunoda, mabhuku, mbatya, simba kubhengi, headphone uye zvichingodaro. Imba yepamberi ine akawanda akapatsanura homwe inobatsira kuronga ako madiki stuffs, zvinyoreso, chikwama, runhare, tambo nezvimwewo Rimwe divi zipi muhomwe uye rimwe divi pajira riya muhomwe; back anti kuba muhomwe yezvinhu zvakakosha
Kuchengetedzwa maficha: Iyo fashoni bhegi rakagadzirwa neyakajeka splashproof & kukwenya kusagadzikana nylon, yakasimba uye inogara kwenguva refu. Iyo mbiri yakapetwa mana mazino ane patip zipi inopa pamwe chete neyakavakirwa-muTSA kuki inopa kumwe kuchengetedzeka kwekufamba kwako uye hupenyu hwezuva nezuva. Tambo inoratidzira inoita kuti iwe uoneke zvakanyanya usiku
Zvimiro: Bhandi rakarukwa zvakanaka remikwende rakanakira iwe kugadzirisa bhegi repombi pasutukesi yako, uchiita rwendo rwako uye kufamba uchienda nyore kwese kwaunoenda. Uine gomba re USB uye nhare, unogona kuchaja foni yako kana zvimwe zvishandiso chero nguva .
Iyi bhegi ndeye yakasarudzika dhizaini anti kubira bhegi, inokodzera varume, vakadzi, vadzidzi chero chinangwa. Iyo yakanakira hupenyu hwezuva nezuva, bhizinesi, basa, kunotenga, kudzika musasa, pikiniki, chikoro, kufamba bhegi.
Model Nhamba T-B3105A
Ruvara: Nhema & Bhuruu; Dema & orenji
Saizi: L29 * W14 * H45 masendimita
Style: Bhizinesi, Mufashoni
Pashure: Bhegi T-B3090AUSB
Zvadaro: Bhegi T-B3142USB